musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Ndeapi mapaki emunyika eUS anonyanya kufarira mhuri?
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Tsvagurudzo nyowani inoburitsa mapaki emhuri-ane hushamwari emunyika muUSA, zvichibva pazvinhu zvakaita semaeka pamushanyi, 'zvakanaka kune zvinokwezva zvevana, zvisikwa nemapaki, avhareji tembiricha yegore uye kunaya kwemvura.
Iwo Virgin Islands ndiyo yakanakisa nyika paki yemhuri-inofararira zororo muUS.
Redwood muCalifornia inouya yechipiri, ine mamakisi e6.30 kunze kwegumi.
Kutora nzvimbo yechitatu Big Bend Texas ine mamakisi e6.26 kubva gumi.
The USA imusha kune mamwe epaki dzinoyevedza pasirese, akakwana kumhuri dzinoda kubuda mune zvakasikwa kuti dziongorore runako rwenyika yadzo.
Asi ndeapi mapaki emunyika eUS ari akanakira mhuri kuti dzishanyire?
Iwo epamusoro gumi akanakisa emhuri-anofarira mapaki emunyika eUS
Iyo Virgin Islands ndiyo yakanakisa nyika paki yemhuri-inofararira zororo muUS, iine huwandu hwakawanda hwe6.58 kubva gumi. Nechepiri-yepamusoro-soro tembiricha ye10 uye ne79.2% yezvinokwezva zvakanyorwa zvakanakira vana.